Nge-Julayi 2018-IiRadiyo zeeNethiwekhi
Ikhaya / 2018 / EyeKhala
Inyanga: July 2018
ezaposwa ngomhla Julayi 11, 2018 Julayi 11, 2018
Ukuphuculwa / ukuhlengahlengiswa kwemakrofoni esemgangathweni ye-Inrico TM-7
Ukusuka kwizikhululo ezahlukeneyo ndixelelwe ukuba ukumodareyithwa kwam Xhosa-7 kunokuba ndonwabise.
Ngale nto ndithathe isigqibo sokutshintsha imakrofoni esemgangathweni (yangaphakathi) ngombhobho we-electret.
Ukuze ungabeki umthwalo kwi Xhosa-7 ngaphezulu, ndaye ndagqiba kwelokuba ndingakhuphi umbane ofunekayo kwisixhobo (ngesidibanisi semakrofoni) kodwa ndisebenzise umbane wangaphandle kwimakrofoni ye-electret.
1 - Intambo ezintathu Imakrofoni ye-electret (Ngocingo oluhlukanisiweyo)
1 - Iqhosha lebhetri yeseli
1 - Isiphathi seqhosha
Ndidibanise imakrofoni entsha ngokomzobo ongezantsi.
Emva kovavanyo lwe-QSO, uhlengahlengiso lubonakalisa ukuba luphuculo olukhulu kwimeko esemgangathweni. Ukumodareyitha kuthiwa kuhle kwaye kugcwele kwaye akusebukhali kwakhona.